चम्किन नसकेका कांग्रेसी ताराहरु – Karnalisandesh
चम्किन नसकेका कांग्रेसी ताराहरु
प्रकाशित मितिः १७ असार २०७८, बिहीबार १४:५६ July 6, 2021
हाल चारवटा संटकका बीच देश अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक र स्वास्थ्य संटक। अरु कसैका कारणले नभएर नितान्तै हाम्रै कारणले यि संटकहरु आइलागेका हुन्। अलि जोडले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षि दलका कारण उल्लेखित संटकहरुको सामना देशले गर्नुपरेको हो।
आगामी भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको खण्डमा राजनीतिक र कानूनी हैसियत गुमाउने कांग्रेस अहिले चरम आन्तरिक विवादमा जाकिएको छ। १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक गृहकार्यका नाममा कतै कोठे भेला भइरहेका छन्। कतै लन्च मिटिङ। गुट अदल बदलदेखि जित हारका प्रसँगहरुले स्थान पाइरहेका छन्। शीर्ष नेताहरुले नैतिकता नदेखाउदा संटकको भूमरीमा फसेको कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ या पुरानै अनुहारकाको पुरानागमन गर्छ? त्यसका केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ।
तर, केही अनुमानहरु लगाउनलाई कुनै मुस्किल भने छैन। यो पार्टी आफूलाई लोतकन्त्रको मसिया ठान्छ। उदार लोकतन्त्रको गीत गाउछ। जनताका जनजीविका र अधिकारको बारेमा लामो समयदेखि लड्दै आएको पार्टी पनि हो। शान्ति, विकास र लोकतन्त्रलाई आफ्नो मूल्य ठान्ने पार्टीको महाधिवेशनलाई ध्यानपूर्वक हेरिनु अन्यथा हुँदैन पनि।
१४औं महाधिवेशनले नयाँ उर्जा थप्ने र समय सापेक्ष नेतृत्व आउनेमा धेरैको शंका छ। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायत ७० पुगेका नेताहरुको आकांक्षालाई देख्दा पनि शंका उत्पन्न भएका हुन्। राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक मूल्यभन्दा पनि गुटको गञ्जालोमा फसेको कांग्रेसले कस्ताे नेतृत्व चयन गर्ला ? भन्ने आम प्रश्नछ। नेता अर्जुननरसिंह केसीले भनेको जस्तो पार्टीका शीर्ष नेताहरु सल्लाहकारमा बस्ने र युवा पंक्तिलाई नेतृत्वमा अघि सार्न सकेको खण्डमा कांग्रेसमा जागरण आउन सक्छ। हजुरबाहरुबाट शासित भइरहेको कांग्रेसीहरुमा उर्जा भरिन सक्छ।
चम्किन नसकेका ताराहरु
कांग्रेसले विधि, विधान र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई बढिभन्दा बढि उठाउने गर्दछ। भलै कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बारेमा छलफल गर्न सकिने अवस्था छ। अहिले दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नेतृत्वका लागि तयार रहेको दृश्यहरु देखा परेका छन्। यस हिसावले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रले जरा गाड्दैछ भन्ने मान्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको संम्भ्रान्त र लिगेसीको साइनोले गाजेको कांग्रेसमा युवा पुस्ता भने जोडदार छ। जसले पार्टीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने हो भने पार्टी र देशलाई नै उर्जा दिन सक्छन्। अध्ययन र अभिव्यक्तिका हिसावमा उनीहरु शसक्त छन्। पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनीहरुका समर्थकहरु बाग्लो देखिन्छन्। कुनैबेला कांग्रेस पार्टीको मान राख्नेहरुमा दुई चार जना नेताहरुको मूख्यगरि भूमिका थियो। शैलाजा, सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्रहरुले चार तारेको मानलाई उचो बनाएका थिए। उनीहरुलाई कांग्रेसका तार चारासमेत भन्ने गरिन्थ्यो। ति चार तारमध्ये दुई जना जिवित छन्। एक जना देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बनिसकेर पनि आफ्नो हैसियत देखाईसकेका छन्। बाँकी एक जना रामचन्द्र पौडेल छन्। पार्टी र देशको नेतृत्वमा पुग्ने अभिलासा पौडेलमा जीवित छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘देउवाको लागि स्वाभाविक रूपमा आफू सभापतिमा नउठे रामचन्द्र पौडेललाई उनी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा अगाडि सार्न सक्छन्। पौडेल उनका समकक्षी हुन् र दक्षिणएशियामा अहिले पौडेलको जस्तो इतिहास भएको अरू नेता भेटिंदैन। पौडेलको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्याग असाधारण छ। उनी सत्तामा बसेर पनि वेदाग झैं छन्। यो सामान्य कुरा होइन। कांग्रेसले पौडेलको कद होचो गरेर पार्टीको उँचाइ बढाउन सक्तैन, पौडेल अझै गहना हुन् कांग्रेसको।’
यसैबेला युवाहरुले मधुर आवाजमा बोल्न थालेको सुनिन्छ। केही दिनअघि पौडेल भेलामा सहभागि बनेका गुरुराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरुको विकल्पमा युवाहरु अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए। नेताहरु डा. चन्दा भण्डारी, धनराज, विश्वप्रकाश, गुरुराज, गगन, जीवन परियार र प्रदिप पौडेलहरुलाई कांग्रेसजी जनहरु ताराका रुपमा हेर्छन। तर, उनीहरु चम्किला तारा हुन् या चम्किन बाँकी ? शैलाजा, सुशील, पाैडेलहरुको जस्तो निष्ठा, त्याग र मुल्यको राजनीति गर्न सक्ने नेताहरु हुन् या होइनन् ? साच्चै नै नेतृत्वका लागि तयार भएका हुन् या शीर्ष नेताहरुसँग घुर्की लगाएर महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केसको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन? यि प्रश्नहरुको उत्तर उनीहरुले गर्ने राजनीतिले देखाउने छ। तर, हाल उनीहरुप्रति कांग्रेसभित्र र बाहिर राम्रै सद्भाव देखिन्छ। कांग्रेसका विद्धान नेता प्रदिप गिरिले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुको नामै लिएर ठूलो प्रसंशा गरेका थिए।
राजनीतिक र वैचारिक रुपमा आफूलाई बलियो बनाउँदै पार्टी र देशलाई गति दिनुपर्ने जिम्मेवारी करिव उनीहरुको काँधमा आईपुगेको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई आराम गर्न लगाएर आफूहरु भूमिकामा आउन सकेको खण्डमा उनीहरु चम्किला तारा दरिने छन्। आफूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा स्थापित गर्न सके भने देशकै चम्किला तारामा हुनेमा दुई मत रहँदैन। आउँदो महाधिवेशनमा युवाहरुको उपस्थिति र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने आम मानिसहरुको अड्कल छ। त्यतिमात्रै होइन्, इतिहासकै कालखण्डमा १४औ माहाधिवेशनलाई देशी तथा विदेशी शक्तिले नजिकबाट नियाली रहेका छन्।